ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: January 2012
ကိုယ်ရံတော်၊ သက်တော်စောင့် ....
ရေကူးဝတ်စုံ၊ မလုံ့ တလုံလေးများနဲ့ မို့ ရုတ်တရက်ကြည့် လိုက်ယင်တော့ တရုတ်မလေးများ
ဟာ ကမ်းခြေမှာအပန်းဖြေနေသလားလို့ ထင်မှတ်မှားစရာပါပဲ...
ဒါပေမယ့် အဆိုပါအမျိူးသမီးလေးများဟာ တရုတ်နိုင်ငံမှ လူချမ်းသာများရဲ့ ကိုယ်ရံတော်၊သက်
တော်စောင့် အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရန်အရည်အချင်းပြည့် မှီစေဖို့ဟိုင်နန်ပြည်နယ်မှ
ဆန်ယ ကျွန်းတွင် ခက်ခဲပင်ပန်းဆင်းရဲလှသည့် သင်တန်းများအား တက်ရောက်လေ့ ကျင့် သင်
အားလုံးနီးပါး တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ ရများဖြစ်ကြသည့် အမျိူးသမီးအယောက် ၂၀ တို့ ဟာ သင်တန်း
ကာလအတွင်းအတွေ့ အကြုံရ၊ ကျွမ်းကျင်ဝါရင့် သည့် ကိုယ်ရံတော်၊သက်တော်စောင့် သင်တန်း
ဆရာများ၏ ကန်ကျောက်၊ထိုးကြိတ်ခြင်း၊ ရေနှစ်ထားခြင်း၊ လေးလံလှသည့် သစ်တုံးကြီးများ
အားသယ်ပိုးကာ ပြေးလွှားရခြင်း စသည့် လေ့ ကျင့် ခန်းများအား စခန်းချစဉ်ကာလအတွင်းအ
ပြင်းအထန်လေ့ ကျင့် သင်ကြားကြရပါတယ်...
ဘောစိနဲ့ တွေ့ ယင် ပျော့ စိမနေဖို့ ဒီလိုကန်ကျောက်ပြီးလေ့ ကျင့် ပေးတာခံကြရပါတယ်...
သနားတတ်တဲ့ ဆရာကတော့ အပျော့စားကူရှင်ပြားကိုသုံးပေမယ့် တိတိကျကျမှန်မှန်
ကန်ကန်လုပ်တဲ့ ဆရာကတော့ မြင်တဲ့ အတိုင်း ကန်ကျောက်ဖိနှိပ်ပါတယ်...
ကျွမ်းကျင်လက်မှတ်ရ အထူးသက်တော်စောင့် သင်တန်းနည်းပြများကိုယ်တိုင်
ရက်သတ္တပါတ် လေးပါတ်ကြာမြင့် သည့် အဆိုပါသင်တန်းကို တရုတ်နိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံးအ
ဖြစ် အမျိူးသမီးကိုယ်ရံတော်များ လေ့ ကျင့် သင်ကြားပေးသည့် တျန်ကျောင်း အထူးသက်တော်
စောင့် ကိုယ်ရံတော်ဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီမှ ပြုလုပ်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
သင်တန်းသူများဟာ သတင်းထောက်လှမ်းရယူခြင်း၊ အကြမ်းဖက်သမားများအား ဟန့် တားချေ
မှုန်းခြင်း၊ ကိုယ်ခံပညာတတ်မြောက်ခြင်းဆိုင်ရာအပြင် စီးပွားရေးနယ်ပယ်ဆိုင်ရာ လူမှုဆက်ဆံ
ရေးအတတ်ပညာများ စသည်တို့ အတွက်စွမ်းရည်ထက်မြက်စေရန်လည်း ၁၀ လကြာသင်ကြား
ထိုအထဲမှ အတော်ဆုံးသင်တန်းသူများအား အစ္စရေးနိုင်ငံရှိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးသင်
တန်းကျောင်းသို့ စေလွှတ်ပြီး ဆက်လက်လေ့ လာသင်ယူစေပါသေးတယ်...
သက်တော်စောင့် တစ်ယောက်ဟာ ရေထဲလည်းငုပ်နိုင်ရမည်မို့ အခုလို
ရေမွန်းအောင်လည်းလေ့ ကျင့် ကြရပါတယ်...
အသက်ရှူမ၀လို့ ရေပေါ်ကိုပေါ်လာယင်တောင် ထပ်ပြီးရေနဲ့ ပက်ခံရသေးတယ်...
လွယ်မယ်လို့ တော့ မထင်လိုက်လေနဲ့ ...ရေထဲမှာတောင် သစ်တုံးကြီးထမ်းပြီး
တစ်ကမ္ဘာလုံးတရုတ်နိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်းများတင်ပို့ ရောင်းချနေရမှုကြောင့် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်လာနေ
သောစီးပွားရေးအရ လူချမ်းသာများလည်းတိုးပွားလာသောကြောင့် သက်တော်စောင့် ကိုယ်ရံ
တော်လုပ်ငန်းများလည်း အလျင်အမြန်များပြားလာခဲ့ ပါတယ်....
ချမ်းသာကြွယ်ဝသည့် စီးပွားရေးသမားများကသာ ငှားရမ်းခဲ့ ပါက လစာကောင်းကောင်းရနိုင်
သည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖြစ်သည်မို့ ကိုယ်ရံတော်သင်တန်းအောင်များအဖြင့် စိတ်ကူးယဉ်
မျှော်လင့် ချက်များမြင့် မားနိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်....
အမျိူးသားကိုယ်ရံတော်များထက်အမျိူးသမီးကိုယ်ရံတော်များကို ပိုမိုခန့် အပ်လာကြရတာက
လည်း ၎င်းတို့ အနေဖြင့် အမျိူးသားများထက် သိသာထင်ရှားမှုလျော့ နည်းခြင်း၊ ၎င်းတို့ အား
ကိုယ်ရေးအတွင်းရေးမှူအဖြစ်၊ ကလေးထိန်းအဖြစ်များပါ စွယ်စုံ ခိုင်းနိုင်သည့် အတွက်ဖြစ်ပါ
အမျိူးသမီးသူဌေးများ၊ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသည့် အနုပညာရှင်များကလည်းအမျိူးသမီးကိုယ်
ရံတော်များကိုရွေးချယ်ခန့် ထားလာကြတာလည်း ပိုမိုများပြားလာနေပါတယ်...
တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ ရပြီးရုံလောက်နဲ့ တော့ ဘ၀အခြေမခိုင်သေးပါဘူး...
ဘောစိသဘောရှိ စေဖို့ အမောလည်းလုံရပါ့ မယ်...
ဒါကြောင့် အပြေးလည်းလေ့ ကျင့် ရပါတယ်...
ကျန်တဲ့ နေရာနင်းချင်နင်းသွားပါ...ဒါလေးတစ်ခုတော့ ချမ်းသာပေးပါ...
အမျိူးသားသက်တော်စောင့် ပုံမှန် တစ်လ ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ လောက်ရနေချိန်မှာ အလုပ်အမျိူး
မျိူး၊ နေရာမျိူးစုံတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ အမျိူးသမီးသက်တော်စောင့် များကတော့ သူတို့ 
ထက်ပိုပြီး တစ်နေ့ ဒေါ်လာ ၁၀၀ အထိ ၀င်ငွေရရှိနေနိုင်ပါတယ်...
ပွဲမ၀င်ခင်၊ အပြင်ကပင်ကြိုတင်လေ့ ကျင့် ကြဆိုသလို ကြီးမားလေးလံတဲ့ တာဝန်တွေ
ပခုံးထမ်းကြရမှာမို့ ဒီလိုလေ့ ကျင့် ကြရတာဖြစ်ပါတယ်...
ဘောစိအတွက်အသက်ပါပေးရမှာမို့ ခေါင်းကိုပုလင်းနဲ့ ရိုက်ခွဲတာလောက်တော့ 
အပျော့ ပေါ့ ... ( သူအရက်မူးပြီး ပုလင်းနဲ့ ရိုက်လည်းခံနိုင်ရည်ရှိသွားတာပေါ့ )
Extreme methods: An instructor smashesabottle overafemale recruit's head duringatraining session for China's first female bodyguards in Beijing
Another recruit receives the same treatment - and has to stand still and take it in order to complete the training
လက်နက်ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ အကြမ်းဖက်သူ၊ လူဆိုးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်တွေ့ ယင်လည်း
အသင့် ဖြစ်အောင် လေ့ ကျင့် ကြရပါတယ်...
Expect the unexpected: Female recruits use rubber knives to practise disarming an armed attacker
သေနတ်ကိုင်ထားတဲ့ သူဆို ဒီလိုတိုက်ခိုက်ရတယ်...
Gun crazy: An instructor shows the female recruits how to disarm an armed attacker
လက်နက်ကိုင်ဆောင်တဲ့ သူတွေနဲ့ ဆိုယင်လည်းဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလည်းဆိုတာ
Hold up: The trainees use rubber guns as they learn how to overcome armed assailants
ခြေထောက်ကိုဒုတ်နဲ့ ရိုက်တာလောက်တော့ အပျော့ ပေါ့ ...
Beating: An instructor from Tianjiao Special Guard Consultant Ltd smashesapiece of wood overarecruit's leg
ဗန်တို၊ ဗန်ရှည်လည်းတတ်ရမယ်ပေါ့ ...
How it's done: An instructor demonstrates how to overpower an attacker
Hand-to-hand combat: Two instructors teach the recruits fighting techniques
ဒီလိုအဆင့် မြင့် တိုက်ကွက်တွေနဲ့ ဆို ဘောစိကိုအန်တု၊ ရန်ပြုမယ့် သူ...
Under control: On the ground with her arms held behind her back, this would-be attacker is going nowhere
အထူးကိုယ်ရံတော်၊ သက်တော်စောင့် တပ်ဖွဲ့ အသင့် ရှိနေပါပြီ...
Elite: The lethal lady recruits stand in formation as they await further instruction
Amazingly, the recruit has to stand there and take it if she wants to qualify as one of China's first female bodyguards.
Posted by Unknown | at 4:11 AM |9comments
မလေးရှားက ကမောက်ကမ၊ ဘောက်ကျတဲ့ ဓါတ်ပုံများပါ...
အာဆီယံနိုင်ငံ၊ အာရှသားအချင်းချင်းဆိုတော့ ကိုရွှေများနဲ့ လည်းအကျင့် စရိုက်ချင်းက
မီးပွိုင့် ဘယ်လိုဖြတ်ရပါ့ ...
ကားနောက်ဖုံးအတွက် အကောင်းဆုံးသော့ ခတ်နည်း...
ဆိုင်ကယ်နဲ့ ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်ပါ အတူတူသော့ ခတ်ထားလိုက်တယ်...
ဦးထုပ်ကြီးသယ်သွားစရာမလိုတော့ ဘူးပေါ့ ...
နောက်ဆုံးပေါ် ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်နဲ့ တူတယ်....
သူတို့ အတွက်တော့ အဆင့် မြင့် ပညာရေးပါပဲလို့ ဆိုလေသလားပဲ...
ဘောဂစံအိမ်လို့ အမည်ပေးရလိမ့် မယ်ထင်တယ်...
ကားနံပါတ်ကိုက မာဖီးယားပါတဲ့ ...ကြောက်စရာပါပဲ...
ဆိုင်ကယ်မတတ်နိုင်သူအတွက် ရသေ့ စိတ်ဖြေပေါ့ ....
ကယ်ဆယ်ရေးကားကိုပါ တစ်လက်စတည်းကယ်ဆယ်ခဲ့ 
သိသိကြီးနဲ့ လုပ်တော့ လည်းခံပေါ့ ဗျာ...
ကားသေးတော့ ယာဉ်ရပ်နားဖို့ အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ ...
Posted by Unknown | at 5:27 AM | 1 comments
လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားမယ့် အဲဒီအကြောင်း ....
Posted by Unknown | at 1:06 AM |0comments
Labels: graphic: general knowledge
ယိုးဒယားမှာပဲဒီလိုရှိတယ်အစ်ကို.... ( ၂ )
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ အိမ်နီးချင်း ယိုးဒယားနိုင်ငံ (ထိုင်းနိုင်ငံ) မှ ကမောက်ကမဓါတ်ပုံလေးများ
အမှန်အကန် အနှိပ်ပါတဲ့ ....ဟုတ်တယ်ဗျာ...လူတွေကလည်း အနှိပ်ခန်းဆိုတာနဲ့ ...
ဒီလိုတားမြစ်တဲ့ ကြေငြာမျိူးနဲ့ မှပဲ ထိရောက်မှာအသေအချာပါပဲ...
လေ့ ကျင့် ခန်းလုပ်ဖို့ ပါ...အိပ်ပျော်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ ...
ထိုင်းဦးဇင်း...ကိုရင်များကတော့ ဘုရားရှိခိုးယင်း၊ တရားစာဆိုယင်းတောင်အိပ်ပျော်
တတ်ကြပါတယ်လို့ ထိုင်းမှာ ရဟန်းဝတ်ခဲ့ တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတစ်ဘုန်းတော်ကြီး
ရန်မဖြစ်နဲ့ တည့် တည့် သွားဆိုတာ ဒီသတိပေးဆိုင်းဘုတ်မျိူးနဲ့ တူတယ်...
ရှူရှူပေါက်လို့ များ အင်္ဂလိပ်စာမတတ်တဲ့ ထိုင်းလူမျိူးကို အချွန်နဲ့ မ သွားလေသလား....
ထိုင်းတွေမှာ အဲဒီ ပွန်း ဆိုတဲ့ နာမည်တော်တော်လူကြိုက်များပုံရတယ်...
အသံထွက်နဲ့ တူအောင်ရေးလိုက်တော့ အပြာဟိုတယ်ဖြစ်ရရှာတယ်...
သိပ်တော့ လည်းမထူးပါဘူး...တည်းခိုခန်းရောက်ယင် အဲဒီလိုပဲဖြစ်ကြမှာမဟုတ်လား...
အသာထိုင်ပြီးချပေးတာစား၊ စကားမများနဲ့ တဲ့ ...
၀ီလ်လီဆိုတာ တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ရယင်တော့ အမျိူးသားတို့ ရဲ့ အမျိူးသားရေး
လုံခြုံရေးများအိပ်ပျော်နေယင် အားနာမနေပါနဲ့ နှိုးလိုက်ပါတဲ့ ...
Posted by Unknown | at 10:22 AM |4comments
အမေရိကန်က ဇောတိကသူဌေးဘီလ်ဂိတ်ရဲ့ အနုမောဒနာ..
ဒီနေ့ ကမ္ဘာမှာ ဒုတိယမြောက်အချမ်းသာဆုံးလူသားဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသား၊ မိုက်ကရို
ဆော့ ဖ်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူ ဘီလ်ဂိတ်ရဲ့ လှူဒန်းမှုအကြောင်း၊ သူဦးဆောင်တဲ့ ဖောင်ဒေး
ရှင်းရဲ့ လှူဒန်းကူညီမှုနဲ့ လူ့ အသက်၊ ကလေးသူငယ်ပေါင်းများစွာရဲ့ အသက်ကိုကယ်ဆယ်နိုင်
ခဲ့ ၊ ဆက်လက်ကယ်ဆယ်နေဆဲအကြောင်းလေး သရုပ်ဖော်ထားတဲ့ ကားချပ်ပါ....
မကြာသေးခင်ကာလများကမှ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ တဲ့ ပန်းသီးကွန်ပြူတာ ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူ
စတိဗ်ဂျော့ ထက်စာယင် ဘီလ်ဂိတ်ရဲ့ စွန့် လွှတ်ပေးလှူမှု၊ စည်းရုံးလှုံ့ ဆော်မှုဟာ ကမ္ဘာတည်
သရွေ့ မော်ကွန်းတင်ထားရမည့် စွမ်းဆောင်ရည်များမို့ ကျွန်တော်ကတော့ သူတီထွင်ခဲ့ တဲ့ မိုက်
ကရိုဆော့ ဖ် နည်းပညာထက်ကို ပိုပြီးအလေးထားချီးကျူးမိပါတယ်...
သူဟာတစ်ကယ်ပဲ ဆူပါမင်း၊ လင်းနို့ လူသားများထက် ပိုပြီးစွမ်းရည်ထက်မြက်သူ၊ စွမ်းဆောင်
Not to beajerk, but there’s no record of Steve Jobs--the saint to
Posted by Unknown | at 9:34 AM | 1 comments
'Boot up the backside camp': Training female bodyg...
လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားမယ့် အဲဒီအကြောင်း .... 27 Ju...
Jail for maid who had sex with 15yr old boy
Toilet was Singaporean woman’s home for 932 days
Think the school run is bad? Children face Indiana...
ဆရာကြီးဦးဂိုအင်ကာနှင့် အမေးအဖြေ.... ခေတ်သစ်လူဝတ်...
ကိုရီးယားစစ်သားများရဲ့ အနုပညာအားပေးမှု... ကိုရီး...
ဘိုးဂေါ်လီ....ဘွားဂေါ်လီများ... စိတ်ပျိူ ကိုယ်နုတ...
10 Facts from Around the World
Thirty storeys in 15 days
A F*cking Infographic F**@ing တစ်လုံးအသုံးအဖြာ...
ဟန်ဆောင်လောကကြီးဝယ်.... ဟန်ဆောင်မာယာများတဲ့ လူ့ ...
Most Chinese women are Material Girls
ကြံကြံဖန်ဖန် တိုင်ပါတ်အက ပြမယ့် အမိုးဖွင့် ကား......
Batik sarong gets granny the men